साताभरि सुस्त गतिमा नेप्से - Naya Patrika
साताभरि सुस्त गतिमा नेप्से
काठमाडौं | साउन २०, २०७५
गत साता नेप्से परिसूचक न्यून अंक घटेको छ । नेप्से ओरालो लागे पनि गत साता कारोबार रकम सामान्य बढेको छ । अघिल्लो साताको तुलनामा गत साताको कारोबार रकम १ दशमलव ९४ प्रतिशत
बढेको छ ।
गत साता पाँचै कारोबार दिन खुला रहेको बजार दुई दिन बढेको थियो भने ३ दिन घटेको थियो । गत साताको पहिलो कारोबार दिन सामान्य अंक बढेर बन्द भएको नेप्से परिसूचक त्यसपछिको २ दिन घटेर बन्द भएको थियो । बजारले निश्चित दिशा लिन नसकेका कारण लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन् । बैंकहरूको ब्याजदर घट्नु, तरलता सहज हुनु र अनलाइन प्रणाली परीक्षणमा आए पनि बजार नबढेकाले लगानीकर्तामा अन्योलता सिर्जना भएको हो । सूचीकृत कम्पनीहरू गत आवको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने क्रममा रहेका छन् । लगानीकर्ताको अपेक्षाअनुसार गत आवमा कम्पनीहरूले नाफा आर्जन गर्न नसकेपछि लगानीकर्ताको मनोबल घटेको हो ।
नेप्सेको १४ दिने आरएसआई गत साताको अन्तिम कारोबार दिन ४२ दशमलव ३४ स्केलमा रहेको छ । न्युट्रल जोनमा रहेको यस आरएसआईले बजारमा सेयर खरिद–बिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्छ ।
गत साता १ सय ८१ कम्पनीको १५ हजार ३ सय १० पटकको कारोबारमा १ अर्ब ७ करोड ६७ लाख ४८ हजार रुपैयाँबराबरको ४० लाख ८४ हजार ५ सय २० कित्ता सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । अघिल्लो साता १ सय ७९ कम्पनीको १६ हजार ८ सय ८६ पटकको कारोबारमा १ अर्ब ५ करोड ६२ लाख ९१ हजार रुपैयाँबराबरको ३९ लाख ४५ हजार ७ सय ६० कित्ता सेयर खरिद–बिक्री भएको थियो ।
अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबार दिन १ हजार १ सय ९१ दशमलव २ बिन्दुमा बन्द भएको बजार गत साताको बिहीबार १ हजार १ सय ९१ दशमलव ३१ बिन्दुमा बन्द भएको छ । परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ३ दशमलव ५१ अंक घटेको छ । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पहिलो दिनको तुलनामा शून्य दशमलव ४० अंक घटेर २ सय ५१ दशमलव १५ बिन्दुमा पुगेको छ ।
गत साता कारोबारमा आएको वाणिज्य बैंक, उत्पादनमूलक र व्यापार समूहको परिसूचकबाहेक अरू सबै समूहको परिसूचक घटेको छ । यस दिन उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक २ दशमलव ३३ अंक र वाणिज्य बैंक समूहको २ दशमलव शून्य ७ अंक बढेको छ । निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक गत साता ६४ दशमलव ६३ अंक, जीवन बिमा समूहको ४५ दशमलव ३४ अंक, होटेल समूहको १८ दशमलव १७ अंक, अन्य समूहको १३ दशमलव ८२ अंक, लघुवित्त समूहको ९ अंक, विकास बैंक समूहको १ दशमलव ४७ अंक, वित्त समूहको शून्य दशमलव ७ अंक, र जलविद्युत् समूहको शून्य दशमलव ५१ अंक घटेको छ । व्यापार समूहको परिसूचक गत साता स्थिर रहेको छ ।
गत साता कारोबार रकम र सेयर संख्याका आधारमा माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड अगाडि रहेको छ । गत साता सो वाणिज्य बैंकको ६ करोड ८७ लाख १० हजार रुपैयाँबराबरको ३ लाख ३५ हजार कित्ता सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । कारोबार संख्याका आधारमा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड अगाडि रहेको छ । सो कम्पनीको गत साता ७ सय ३१ पटक सेयर कारोबार भएको छ ।
एक्सेलको नाफा १५ करोड ६६ लाख
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले गत आवको चौथो त्रैमासमा १५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको हो । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कम्पनीले १५ करोड ४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा घटे पनि खुद ब्याज आम्दानी र खराब कर्जा संकलन गर्न सफल भएका कारण कम्पनीको नाफा सामान्य बढेको हो ।
६९ करोड २६ लाख चुक्ता पुँजी रहेको यस बैंकको जगेडा कोष समीक्षा अवधिमा २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीले सो अवधिमा ५ अर्ब २३ करोड निक्षेप संकलन गरी ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो अवधिमा कम्पनीले ३३ करोड ८८ लाख खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ भने २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ ।
कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा अघिल्लो आवको तुलनामा घटेर शून्य दशमलव ६२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । कम्पनीले सो अवधिमा ३ करोड ८ लाख रुपैयाँ खराब कर्जा संकलन गरेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी रू. २२ दशमलव ६१ रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १४ दशमलव ४२ रहेको छ ।
५० प्रतिशत बढ्यो मञ्जुश्रीको नाफा
अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासमा गत आवको सोही अवधिमा मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडको नाफा ५० प्रतिशत बढेको छ । सो अवधिमा कम्पनीले ९ करोड ७० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी बढेसँगै सञ्चालन मुनाफा बढेपछि कम्पनीको नाफा बढेको हो ।
समीक्षा अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८० करोड ४० लाख रहेको छ भने जगेडा कोष १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले सो अवधिमा ६ अर्ब ७ करोड निक्षेप संकलन गरी ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा बढेर २ दशमलव ११ पुगेको छ कम्पनीले २० करोड ६० लाख खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ भने १२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी रू. १२ दशमलव शून्य ६ रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ९ दशमलव ७० रहेको छ ।